सुझावहरू: विशेषज्ञहरूले COVID-19 | को बारेमा मुख्य प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ लान्टियन बिशुई
किन सिनफादी थोक बजार बेइजि inको सबैभन्दा नयाँ COVID-19 प्रकोपको स्रोत हुन भन्ने शंका गरिएको छ?
सामान्यतया, कम तापक्रम, लामो भाइरस बाँच्न सक्छ। त्यस्ता थोक बजारहरूमा समुद्री खाना जमिन भण्डार गरिएको हुन्छ र भाइरसलाई लामो समयसम्म बाँच्न सक्षम पार्छ, परिणामस्वरूप मानिसहरूमा यसको प्रसारणको सम्भावना बढ्छ। थप रूपमा, ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू त्यस्ता स्थानहरूमा प्रवेश गर्छन् र बाहिर निस्किन्छन्, र कोलोना भाइरसको साथ प्रवेश गर्ने एकल व्यक्तिले यी ठाउँहरूमा भाइरसको फैलावट निम्त्याउन सक्छ। यस प्रकोपका सबै पुष्टि भएका घटनाहरू बजारसँग जोडिएको पाए पछि, बजारमा ध्यान दिइयो।
बजारमा भाइरस सार्न को स्रोत के हो? के यो मान्छे हो, खाद्य पदार्थहरू जस्तै मासु, माछा वा अन्य बजारमा बेचिन्छ?
वू: यो प्रसारणको सही स्रोत निष्कर्षमा पुर्‍याउन धेरै गाह्रो छ। हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं कि बजारमा बेचेको साल्मन स्रोतको मात्र आधारमा भन्ने निष्कर्षमा आधारित छ कि बजारमा साल्मनको लागि काट्ने बोर्डहरूले भाइरसको लागि सकारात्मक परीक्षण गर्यो। त्यहाँ अन्य सम्भाव्यताहरू हुन सक्छन् जस्तै काट्ने बोर्डको एक मालिक स infected्क्रमित थियो, वा अन्य खानालाई काट्ने बोर्डको मालिकले बेचेको छ। वा अन्य शहरका एक खरीदारले भाइरसको बजारमा फैलाएको कारण। बजारमा मानिसहरुको प्रवाह ठूलो थियो, र धेरै चीज बेचिन्थ्यो। यो सम्भव छैन कि प्रसारणको सही स्रोत छोटो समयमा फेला पर्नेछ।
यो घटना सुरु हुनु अघि बेइजिले ally० भन्दा बढी दिनसम्म कुनै नयाँ स्थानीय रूपमा प्रसारित COVID-१ mitted घटना रिपोर्ट गरेको थिएन र कोरोना भाइरसको बजारमा उत्पत्ति भएको थिएन। यदि अनुसन्धान पश्चात यो पुष्टि भयो कि भाइरसका लागि सकारात्मक परीक्षण गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये कुनै पनि बेइजि inमा संक्रमित भएको छैन भने सम्भवतः यो भाइरस दाँतका सामानहरू मार्फत विदेश वा चीनका अन्य ठाउँहरूबाट बेइजि intoमा पेश गरिएको थियो।
तातो उत्पादनहरू, साइटम्याप, स्क्रिन वाइपहरू व्यक्तिगत रूपमा लपेटिन्छ, सनस्क्रीन वाइपहरू, सर्वश्रेष्ठ लेन्स वाइपहरू, लेन्स सफा टिश्यू,